Ny ‘Hakanton’ny’ Tsy Fahazakàna Lahy Tia Lahy Na Vavy Tia Vavy, Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2015 10:46 GMT
Lena Klimova, ny mpamorona ny Children-404 (Ankizy-404), tambajotra amin'ny aterineto, hanampiana ireo tanora LGBT any Rosia, mitovitovy amin'ilay fanentanana “It Gets Better” (Ho Tsaratsara Kokoa io) any Etazonia, dia nanao tetikasa vaovao natao hahamenatra ireo mpampiasa aterineto izay nandefa fandrahonana ho faty tany aminy.
Ny 20 Aprily, namboraka rakitsary i Klimova, nitondra ny lohateny hoe “Olona Tsara Tarehy sy ny Zavatra Nolazain'izy Ireo Ahy“, izay nandefasany ho hitan'ny besy ny maro ny sarin'ireo olona tsirairay amin'ny fiainan'izy ireo andavan'andro, misy ireo hafatra mandrahona nalefan'izy ireo taminy tao amin'ny VKontakte, ilay tambajotra sosialy lehibe indrindra any Rosia.
Ny volana Novambra 2014, nanomboka nikendry ny vondron'i Klimova ireo mpitandro ny filaminana Rosiana, Children-404, noho ny fanaparitahana ny “fampielezana ny fifankatiavan'ny lahy samy lahy ary vavy samy vavy.” Ny faramparan'ny volana Martsa 2015, namoaka didy ny fitsaràna ao St. Petersburg haniitsohana ilay vondrona tao amin'ny VKontakte, izay mampalaza azy indrindra. Manankery nanomboka ny 25 Aprily ilay didim-pitsaràna.